Su'aalo laga keenay xaq u siinta daryeel caafimaad dadywoga sharci la'aanta ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Su'aalo laga keenay xaq u siinta daryeel caafimaad dadywoga sharci la'aanta ah
La daabacay måndag 26 november 2012 kl 12.08
Ururka dhakhaatiirta Iswedhen ayaa aaminsan in ay ka dhalan karto dhibaato dhanka anshaxa (etisk) hadii la hirgeliyo hindisaha dowladda ee xaqa u siinaya qaxootiga sharci la'aanta ah daryeelka caafimaad ee degdegaa.
Uruurka dhakhaatiirta ayaa aaminsan in dhibaato ku noqon karta dhakhtarka sidii uu u go'aamin lahaa ruuxa sharci la'aanta ah ee ay tahay in daryeel la siiyo iyo ruuxa ay tahay in aan la siin.
Hindisaha sharcigaan ayaa waxaan soo saarey wasaarada arimaha bulshada kaas oo kamicno ah sidii dadyowga sharci la'aanta ku degan dalkan Iswedhen xaq loogu siiin-lahaa daryeel caafimaad oo lamid ah kan lasiiyo dadka dalbada magangelyada. Daryeelkaas ayaa ah kan aan dib loo dhigi karin ama aan la sugi karin. Laakiin waxay taas ka micno tahay ayaan weli si fiican loo baarin balse waa mid go'aan ka gaarideeda ay saarantahay ruuxa dhakhtarka ah.
Dhakhaatiirta waxay jawaab wanaagsan u raadinayaan ayaa ah su'aalaha la xiriirra xadka arintaan. Tusaale waxaan suuto gal ah in ruuxa uu baaahan karo daryeel ka bad baadin karo cudur mustakhbalka. Waxay marka dhakhaatiirtu isweydiinayaan ayaa ah goorta ay ok tahay in bukaanka la daweeyo iyo goorta aysan ok aheyn oo aysan degdeg aheyn daweynta.
Dhibaato kale oo ay dhaqtarado sheegeen oo xal u baahan ayaa ah, sida laga yeelayo bukaanka aan laheyn afarta namber ee aqoonsiga, sida dawada loo qorey kula soo bixi la haayeen. Waxaa maxay waxa ay tahay in dhakhtarka uu sameeyo?
- Ma waxaa la rabaa in dhakhtarka isla goobta dawada ku bixiyo? Sidee baa lagu xameyn doona waxyeelada ay dawado dhaliso amaba hadii lagu natiijada daweynta guuldaro keento. Waxaan loo baahanyahay in su'aalaas laga jawaabo oo xal loo keeno ayey tiri Kristina Södelind Rutberg oo katirsan ururka dhakhaatiirta Iswedhen.